Noma yimuphi umama okungenani wake wabuza umbuzo: "Ungakhetha kanjani ingane izingubo zasebusika? "Yiziphi izinto ezingcono ukukhetha, yiziphi izici okufanele izingubo kufanele zihambe ukuze zifinyelele futhi zilula?
Kufanele kube yizembatho zengane, ngakho-ke emvilophini, naphezu kokushisa okuphansi, kwakumnandi futhi kufudumala, futhi kuma-overalls kungcono ukudlala, ukugijima, ukugubha intaba? Futhi yini engcono ukukhetha ingane - ama-overalls noma ijajethi enezinwele?
Kuzalwa okusha, imvilophu efudumele yokuhamba iyadingeka ebusika. Ama-envelopes angasetshenziswa esihlalweni semoto. Ezimweni zobusika obusika baseRussia imvilophu ephuma ngoboya bemvelo, isibonelo, kusukela emhlathini wezimvu kungcono. Ngokuvamile, lezi zivivunguli zinombani ojikeleze umjikelezo, ngenxa yokuthi ungahlukanisa kanjani ingxenye ephezulu ukusuka phansi futhi usebenzise izingxenye ngokwahlukana. Kukhona namamodeli ane-zipper phakathi, okungaguqulwa ngendlala evamile. Izingane ezisebenzayo zemibukiso enezikhwama nemikhono ezizokwenza.
Uma ukhetha i-jumpsuit, cabangela iminyaka yengane nezinye izici zokuklama zomkhiqizo. Ngisho nemininingwane encane kunazo zonke izingubo zasebusika zingenza zifudumele futhi zikhululeke kakhulu. Kuzingane kuze kube unyaka owodwa, kufanele kukhethwe i-jumpsuit ukuze ikwazi ukugqoka kalula futhi isuswe ngokushesha. Amamodeli angcono kakhulu anezipper ezimbili eziya "emilenzeni", noma izinhlobonhlobo ezine-oblique zipper eyodwa, ekhonjelwe kusukela ehlombe kuya phansi komlenze ohlukile. Futhi kubantwana beminyaka yobudala kubalulekile ukukhetha imodeli eningi kakhulu "engathuli," engayigudli indwangu enkulu, futhi i-Velcro nombani bane-stroke esithambile. Lokhu kuyasiza uma ingane ibuya kusukela ekuhambeni ukuya ekulele futhi idinga ukungahlanjululwa futhi ifakwe esitokisini ngaphandle kokuvuka.
Umbani udinga ukunakwa okukhethekile. Kumele kube ngekhwalithi ephezulu, ngaphandle kokuhlehliswa nezixhumanisi ezikhubazekile. Inkambo yombani akufanele ibe yinkimbinkimbi, kodwa akulula. Ngaphandle, i-zipper kufanele ihlanganiswe nefilimu evikelayo ukuyivikela emoyeni. Futhi kufanele kube ne-valve yangaphakathi, evimbela ekutholeni izingubo zibe yizipper zombane. Akusizi ngalutho ukuvikeleka okumelene nokuphoqa, ngenxa yokuthi umbani "awulumisi" isilwane somntwana. Ukucabangela yonke lemininingwane, uma uthenga i-jumpsuit, izikhathi eziningana inkinobho-vula wonke umbane ukuhlola ukusebenza nokubukeka kwabo.
Ama-overalls amantombazane kufanele abe nokubuyela ngokuphelele. Imilenze, ephela nge-cuff ebhentshini elisezingeni, ivikela umlenze wengane emoyeni nasemakhazeni. Imichilo ye-Rubber, ehlanganiswe nezinkinobho ezibhincini, isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi amabhulukwe ayixhashazi, futhi lelo qhwa aliwa ngaphansi kwabo.
Ama-overalls omntwana ohamba noma ofunda ukuhamba, kufanele abe ngaphandle kwebhulazi elinamandla futhi elikhukhumezayo. Benza ukuthi izingane zingahambi kahle. Uma ingane ingayi okwamanje, khona-ke ungathenga i-transformer jikelele. Iphenduka isikhwama sokulala, uma uphinde uvala futhi izinkinobho phakathi kwemilenze. Le modeli ilula kakhulu uma ingane ihamba ngokulingana njalo esihlalweni semoto kanye nomgibeli.
Akungabazeki ukuthi ama-overalls ayinto elula kakhulu futhi ewusizo kubantwana abancane. Ezingqungqutheleni zengane, ungayithatha ngokuphepha ezandleni zakho, uyibeke esitokisini, futhi ama-overalls awaphakamisiwe. Akudingeki ukuba ilungiswe njalo futhi ihoxiswe, umoya awuqhubeki kuwo. Izembatho zezingane ezingaphezu kweminyaka engu-3 zingashintshwa zibe isethi ehlukile yamagebengu namabhulukwe. Kule nkathi lapho izingane zisho ukuhlelwa kwabadwebi futhi kuzoba lula ukuvakashela indlu yangasese kule suti. Uma kwenzeka ingane ishisa, ibhokisi lingasuswa, futhi uma ingane ebuya ekuhambeni ibukeka sengathi i-chimney igwetshiwe, i-trousers ingahlanzwa kalula ngaphandle kwejackethi.
Izembatho zokushisa zengane zingakhethwa ngokusho kwemingcele efanayo, lokhu kusebenza kokubili ama-overalls namajeketi. Yiqiniso, uma ukhetha amajackti, udinga ukucabangela ezinye izimo ezibucayi. Ubude bengubo kufanele bube phakathi kwekhasi. Abanye abakhiqizi benza i-backrest isikhathi eside kunokuba ishalofu ukuze wenze ijaji libe lincane kakhulu. Ijacket yasebusika kufanele ibe nenqolobane yokuthuthwa kwe-sweater kanye ne-air. Kumelwe futhi kube nombuthano ophansi ukugcina ukushisa. Amamodeli amabili amabili angavamile futhi asebenzayo.
Amaphakhethi angcono kakhulu ukukhetha ngesimo se-semi-jikelele. Ama-half-overalls nama-front zippers alula ukugqoka kumntwana eyedwa. Ukuze wenze lokhu, ungahle ulungise ubude bezintambo.
Kusukela eminyakeni engama-5-6 ubudala ingane ingathenga ibhulukwe kwi-band elastic kanye nejacket ende. Abazali abaningi emadodakazini abo kusukela eminyakeni 4-5 bathengela ingubo noma ijazi elifushane nge-hood ehlonywe ngoboya. Uma uthengela amabhantshi amantombazane anezinhlayiya kanye nama-rhinestones, udinga ukucabangela ukuthi emva kokugeza okokuqala ubuhle bungaphela.
Kubaluleke kakhulu ukukhetha izinto okuvela kulo nto. Indwangu yangaphandle yamagebhu, ama-overalls kanye nama-overalls kufanele abe buthambile kakhulu, mhlawumbe ingcolile-ephuzile, engenawo amanzi futhi engenawo amandla. Izingane, ungakhetha konke okwenziwe ngamakhiwe ekotini ngokufaka i-polyamide noma i-polyester, ehlanganiswe ne-Teflon layer.
Ukugcoba kufanele kufakwe kahle. Izambatho zasebusika, i-flannel, uboya obugcwele, i-cotton knit fabric ifanisa ingane.
Njenge-heater, i-fluff ivame ukusetshenziselwa ngezimpande zomhlaba. Ezingubo ezinjalo ingane ngeke iqede ngisho namaqhwa anamandla. Kodwa phansi amabhakede adinga ukunakekelwa okuphawulekayo. Qiniseka ukuthi ulandela imiyalo yelebuli yokumisa, ukugeza nokugcina umkhiqizo.
Amajajethi nama-overalls anezimpahla zokwenza izinto kulula ukuphatha izingubo zokugqoka, ngokungafani namajeketi angaphansi. Ukwengeza, izimfanelo zokulondoloza ukushisa kwezizinto ezinjalo azibi nakakhulu kunomkhuhlane wemvelo. Amagqabhethi aphansi aphansi kakhulu. Ngakho-ke, ngaphansi kwezingubo zokugqoka, kuyimfashini ukugqoka uhlaka olulodwa lwezingubo, futhi ingane kulula ukuhamba.
Njengoba unikezwe yonke imininingwane echazwe ngenhla, ungakwazi kalula ukuthatha izingubo zasebusika ezinganeni ezokujabulisa wena kanye ne-mod encane, futhi lapho umntwana engafaki ngisho nesimo sezulu esibandayo.
Ingane yakho esencane isithandana!
Indlela yokuhlela iholide lasekhaya lezingane
Indlela yokuphumelela nokugwema ukwehluleka ekukhulisweni kwezingane?
Incazelo emfushane ye-horoscope ye-Taurus
Ungakhetha kanjani i-tonic emihle ebusweni?
Ukukhethwa kokudla kwe-angina
Indlela yokwakha ubuhlobo phakathi komyeni nomfazi
Ukuzikhandla ngezinsimbi zezintambo: izinto, amathiphu, izimfihlo
Indlela yokujoyina ngokushesha ithimba elisha
Izimpawu ze-Autism ezinganeni
Hlakulela ama-daylilies ngendlela efanele
Amazambane ama-zrazy ane inyama enobisi
Kulungile kanjani ukusebenzisa ukugqama ebusweni?
Amadoda adonsa abesifazane abathandekayo nabangenalutho
Yini okufanele ibe yindoda enhle?